ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်းနှင့် ၎င်း၏ တံတိုင်းများ*
တည်ရှိသည့် နိုင်ငံ အစ္စရေးနိုင်ငံ
အိုးလ်ဒ်စီးတီး ဟု ခေါ်ကြသော ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်းသည် ၀.၃၅ စတုရန်းမိုင် (၀.၉ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ကျယ်ဝန်းသော တံတိုင်းခတ်ထားသော နယ်မြေ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး  ယနေ့ခေတ် အစ္စရေးနိုင်ငံ ဂျေရုဆလင်မြို့ အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။
၁၈၆၀ ခုနှစ် ဂျူး ရပ်ကွက် မစ်ရှ်ကေးနော့ ရှာနာနင်းမ် ကို မတည်ထောင်မီ အချိန် အထိ ထိုနယ်မြေသည် ဂျေရုဆလင်မြို့ တစ်မြို့လုံးစာ နေရာ ဖြစ်သည်။
ထိုမြို့ဟောင်း အတွင်းတွင် ဘာသာပေါင်းစုံတို့၏ အဓိက အရေးပါသော နေရာများ ရှိပြီး ဂျူးတို့ အတွက် မောင့်ဘုရားကျောင်း နှင့် အနောက်ဘက် တံတိုင်း ၊ ခရစ်ယာန်တို့အတွက် ဆယ်ပါကာ ဘုရားကျောင်း ၊ မွတ်စလင်တို့အတွက် ရော့ခ်အမိုးခုံး နှင့် အယ်လ်အာ့ခ်ဆာ ဗလီ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုနေရာအား ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ အဖြစ် ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
အစဉ်အလာအားဖြင့် မြို့ဟောင်းကို မညီမျှသော အစိတ်အပိုင်း ၄ ခု ပိုင်းခြားထားပြီး ယခု သတ်မှတ်မှုမှာ ၁၉ ရာစု မှသာ စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။  ယနေ့တွင်မူ မြို့ဟောင်းကို အရှေ့မြောက်ထောင့်မှစ၍ အကြမ်းမျဉ်း ပိုင်းခြား ထားသည်မှာ မွတ်စလင်ရပ်ကွက်၊ ခရစ်ယာန် ရပ်ကွက်၊ အာမေးနီးယန်း ရပ်ကွက် နှင့် ဂျူး ရပ်ကွက် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ မြို့ဟောင်း၏ အရေးပါသော ကာကွယ်ရေး တံတိုင်း နှင့် မြို့တံခါးတို့ကို ၁၅၃၅-၁၅၄၂ ခုနှစ် အတွင်း တူရကီ စူလတန် ကြီးမြတ်သော ဆူလေမန် လက်ထက်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခု အချိန်တွင် မြို့ဟောင်း အတွင်း မွတ်စလင် နှင့် ခရစ်ယာန် ရပ်ကွက်တွင်သာ လူနေထိုင်ကြသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် လူဦးရေမှာ ၃၆,၉၆၅ ဦး ဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှုဖြင့် ခွဲခြမ်းကြည့်ပါက ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မွတ်စလင် ၂၇,၅၀၀ ဦး (၁၉၆၇ ခုနှစ် ၁၇,၀၀၀ ဦးမှ မြင့်တက်လာခြင်း ၂၀၁၃ တွင် ၃၀,၀၀၀ ကျော် ရှိပြီး တိုးပွားလျက် ရှိသည်။) ၊ ခရစ်ယာန် ၅,၆၈၁ ဦး (၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ၆,၀၀၀ ဦး) ၊ အာမေးနီးယန်း ၇၉၀ ဦး (၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၅၀၀ ဦး၊ လျော့ကျလျက် ရှိသည်။) နှင့် ဂျူး ၃,၀၈၉ ဦး ( ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် တစ်ဦး တစ်ယောက်မှ မရှိခဲ့ပဲ ၁၉၄၈ ခုနှစ် အာရပ်-အစ္စရေး စစ်ပွဲ အပြီး ဂျော်ဒန်တို့မှ သိမ်းယူပြီးနောက်တွင် ဂျူးအားလုံးကို မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ၃,၀၀၀ ဦး ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီး တိုးပွားလျက် ရှိသည်။)
၁၉၄၈ ခုနှစ် အာရပ်-အစ္စရေး စစ်ပွဲအပြီးတွင် မြို့ဟောင်းအား ဂျော်ဒန်တို့မှ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည် ၁၉၆၇ ခုနှစ် ခြောက်ရက်စစ်ပွဲ အတွင်းတွင် မောင့်ဘုရားကျောင်းတွင် လက်ချည်းသက်သက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး အစ္စရေး တပ်များမှ မြို့ဟောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ဂျေရုဆလင် အရှေ့ပိုင်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အစ္စရေး နယ်နိမိတ် အတွင်း သွတ်သွင်းခဲ့ပြီး မြို့တော် အနောက်ပိုင်းနှင့် ပြန်လည် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ ယနေ့တွင် အစ္စရေး အစိုးရမှ နယ်မြေ တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး နိုင်ငံတော်မြို့တော်၏ အစိတ်အပိုင်းဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော်လည်း ဂျေရုဆလင် အရှေ့ပိုင်းကို အစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်း သွတ်သွင်းခဲ့သော ၁၉၈၀ ဂျေရုဆလင် ဥပဒေအား ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ၄၇၈ ဖြင့် တရားမဝင်ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ အရှေ့ဂျေရုဆလင်အား သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းနယ်နိမိတ် အဖြစ်သာ ယူဆကြသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဂျေရုဆလင်၏ ရှေးအကျဆုံး စာရေးသားမှု အစိတ်အပိုင်းအား မြို့ဟောင်းနံရံ၏ အပြင်ဘက်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
↑ Kollek၊ Teddy (1977)။ "Afterword"။ in John Phillips (ed.)။ A Will to Survive – Israel: the Faces of the Terror 1948-the Faces of Hope Today။ Dial Press/James Wade။ about 225 acres
↑ Ben-Arieh၊ Yehoshua (1984)။ Jerusalem in the 19th Century, The Old City။ Yad Izhak Ben Zvi & St. Martin's Press။ p. 14။ ISBN 0-312-44187-8။
↑ Jerusalem The Old City: Urban Fabric and Geopolitical Implications။ International Peace and Cooperation Center (2009)။ 2013-09-28 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Bracha Slae။ "Demography in Jerusalem’s Old City"၊ 13 July 2013။ 26 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Beltran၊ Gray (9 May 2011)။ Torn between two worlds and an uncertain future။ Columbia Journalism School။ 14 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Benveniśtî၊ Eyāl (2004)။ The international law of occupation။ Princeton University Press။ pp. 112–13။ ISBN 978-0-691-12130-7။
↑ Tiny fragment bears oldest script found in Jerusalem။ Telegraph.co.uk (2010-07-12)။ 2013-10-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်း&oldid=718330" မှ ရယူရန်